lending8, Author at Mission Asset Fund - Page9of 10
माइक्रोलोन स्पटलाइट: येरल क्याल्डास, मुटु भर्दै
lending8 मा मे 22, 2014 द्वारा लिखित।
येरलको जन्म पेरूको तटीय शहर चिम्बोटेमा भएको थियो। उनका दुई भाई र दुई बहिनीहरू छन्। उनको आमाको आफ्नै व्यवसाय थियो र उनका बुवाले खेतमा काम गर्नुभयो। उनका बाबुआमाको सम्बन्धविच्छेद पछि, उहाँ छुट्टीको समयमा उनीहरूलाई मद्दत गर्न उनीहरू बीचमा पछिल्तिर जानुहुन्थ्यो। ऊ उसको किराना व्यवसायका लागि आफ्नी आमासँग यात्रा गर्थ्यो र बुबामा जान्छ जो पछि रेस्टुरेन्टमा काम गर्थ्यो। येरलले खानालाई मन पराउँथे र भान्साकोठामा काम गरेर रमाईलो मन पराउँथे, क्लासिक पेरुभिय खाना तयार पार्दै र पकाउँदा।
यो त्यहाँ उसले शेफ बन्ने सपना देख्यो।
येरलसँग एउटा पूर्वावलोकनकर्ताको रूपमा सफल हुनको लागि एक ठोस पृष्ठभूमि थियो तर थप अवसरहरूको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका आउँदा थप चुनौतीहरू सामना गरियो। दुई मुख्य व्यक्तिहरू उसले सामना गर्नु परेको भाषा अवरोध र एक सामाजिक सुरक्षा नम्बर छैन।
जब येरल बै banks्कको खोजीमा उसको व्यवसायका लागि hisण दिन चाहन्छ, उसलाई सामाजिक सुरक्षा नम्बर नहुँदा उनी अवरुद्ध रहन्छन्।
“त्यहाँ थुप्रै कठिनाइ भए पनि म धैर्य थिए र विश्वास थियो। मलाई पक्का विश्वास थियो कि पैसा आउनेछ किनकि मँ के गर्न चाहन्छु भन्ने मेरो धारणा थियो, ”यरलले भने।
२०११ मा, येराल हाम्रो स्टाफ सदस्य जोएल र डोरिस मार्फत एमएएफमा परिचित भएको थियो। उहाँ तिनीहरू समक्ष पुग्नको लागि उधारो दिनुहुन्छ, खास गरी किनभने उनीहरू दुवैले उहाँसँग स्पेनिश बोल्न सक्थे र एमएएफले कसरी मद्दत गर्न सक्थे भनेर वर्णन गरे।
येरलले आफ्ना समस्याहरू साझेदारी गर्न सहज महसुस गरे र भविष्यको आफ्नो रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि योजना बनाए। उनी आफ्नो क्रेडिट जम्मा गर्न दुई १ टीटी T टीमा सामेल भए र एक microloan को लागी उपकरण र उत्पादनहरु मा आफ्नो व्यवसाय को लागी लगानी गर्न आवेदन।
यरलले भने उनको जीवन नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ जबबाट एमएएफ आयो। ऊ भावनात्मक र आर्थिक रूपमा बढी स्थिर महसुस गर्दछ र विश्वास गर्दछ ऊ एक उद्यमीको रूपमा सफल हुन सक्छ।
उसको भोजनालय Cholo Soy दुई वर्ष पहिले खोलियो र उनले भने कि यो "बढ्दै र बढ्दै छ"। चोलो सोयाले पेरुभियन व्यञ्जनहरू जस्तै सेभिक र क्याब्रिटो नोर्टेनो डे कोर्डो (भेडाको मासु) को परिवर्तन गर्ने मेनु प्रस्तुत गर्दछ। उनी विभिन्न प्रकारका भाँडा माझ्ने र पेरूका सम्पूर्ण क्षेत्रका पाक प्रदायकहरूलाई आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रकाश पार्ने कुरामा गहिरो चासो राख्दछन्।
चोलो सोया प्रतिष्ठामा बढ्दैछ। यो मिसन जिल्लामा प्लाजा एडलेन्ट भवनको पहिलो फ्लोरमा छ र हाल केवल खाजा सेवा गर्दछ। एकचोटि ऊसँग धेरै गर्ने क्षमता भएपछि येरल बिहानको खाजाबाट बेलुकाको खानासम्म खुला रहन, बढी कामदारहरू राख्ने र ठूलो ठाउँमा जान चाहान्छ।
"मेरो सपना भनेको देशभरि नै निगमजस्ता धेरै रेस्टुरेन्टहरू हुनुपर्दछ र म त्यसलाई केन्द्रीय स्थानबाट व्यवस्थापन गर्दछु," यरलले भने।
उनका गर्वका पलहरू जब ए लेख बाहिर आए कि Cholo Soy rave समीक्षा दिए र जब वरिष्ठ शहर अधिकारीहरु रेस्टुराँमा आए र उसलाई बताए कि उनले राम्रो सेभिस सेवा गरे जुन उनीहरूले कहिल्यै चाखेका थिए।
"जब उनीहरू भन्छन् कि उनीहरू मेरो खाना खान चाहन्छन्, यसले मेरो नाम र मेरो कामको गर्व गर्दछ।" यरोलको आँखामा जोश र दृढ संकल्प देख्न गाह्रो छैन किनकि उनी चोलो सोयाको सानो काउन्टरको पछाडि उभिएका छन् र खुशीसाथ उसको सामने बेंचमा बसेका ग्राहकहरूलाई खाना दिन्छन्। एक आप्रवासी हुनु को चुनौतिहरु को बावजुद, उनी आशावादी बने र अन्य महत्वाकांक्षी उद्यमीहरुलाई सल्लाह पनि दिए।
“आफ्ना सपनाहरूमा विश्वास गर्न छोड्नुहोस्। म आफैंमा विश्वास गर्दछु र मेरो खाना ठूलो छ। त्यहाँ आलोचकहरू छन् तर उनीहरूको बारेमा सोच्नुहोस्। केवल आफैमा विश्वास गर्नुहोस्। ”
राम्रो बे क्षेत्रको लागि MAF भोट गर्नुहोस्
MAF गुगल खाडी क्षेत्र प्रभाव चुनौतीको लागि एक फाइनलिस्ट हो। शीर्ष4बनाउन हामीलाई तपाईंको समर्थन चाहिन्छ!
हामी घोषणा गर्न उत्साहित छौं कि Mission Asset Fund मा शीर्ष १० फाइनलिस्ट हो खाडी क्षेत्र गुगल प्रभाव चुनौती, बे क्षेत्र क्षेत्र मा नवीनता को लागी आफ्नो दृष्टिकोण साझा गर्न स्थानीय गैर नाफा नाफा को लागी एक प्रतियोगिता! हामी सम्मानका लागि १,००० भन्दा बढी स्थानीय गैर-नाफामुखी संस्थाहरूबाट छानिएका छौं। जब हामी यो खबर पाउँथ्यौं यो अफिसमा एकदमै पागल दिन थियो!
यो हामी सबैको लागि परिभाषित क्षण हो जुन कडा परिश्रम गरिरहेका परिवारहरूको लागि उचित वित्तीय बजार बनाउन कडा मेहनत गरिरहेका छन। हामी मान्यता र यो अद्वितीय अवसर को लागी आभारी छौं हाम्रो कामलाई अर्को तहमा लैजानको लागि।
अर्को १२ दिनको लागि, संसारमा जो कोहीले पनि आफ्नो मन पर्ने चार नाफा नक्कलहरू (तर एक पटक मात्र!) संसारको कुनै पनि ठाउँमा, कम्प्युटर वा मोबाइल फोनमा मतदान गर्न सक्दछन्।
जून २ सम्ममा शीर्ष चार मतदाताहरूले १TP2T500,000 अनुदान, गुगलबाट टेक्निकल मद्दत र निःशुल्क सह-कार्य गर्ने ठाउँ प्राप्त गर्छन्!
किन तपाईंले MAF लाई भोट दिनु पर्छ
किनकि हामी विश्वास गर्छौं कि एक उत्तम खाडी क्षेत्र एक त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ उद्यमीहरूले उनीहरूको व्यवसाय सुरु गर्न सक्दछन्, विद्यार्थीहरूले कलेज ट्युसनको लागि भुक्तान गर्न सक्नेछन्, आप्रवासीहरूले डिएसीए र नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्, र मेहनती परिवारहरूले क्रेडिट पहुँच गर्न सक्नेछन्।
त्यहाँ २०3,००० बे एरिया परिवारहरू सस्तो loansण, नगद चेक, भाडा अपार्टमेन्ट, वा सुविधाहरू सेट अप गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। औसतन, तिनीहरूको of .1१ पी टी १ टी भुक्तानी ndणदाताहरूको शुल्क तिर जान्छ, तिनीहरूलाई debtण र गरीबीको चक्रमा फसाउने। अर्को दुई बर्षमा, हामी २ offer नाफामुखी संस्थाको साथ साझेदारी गर्ने योजना गर्छौं हाम्रो प्रस्तावलाई Lending Circles कार्यक्रम जसले हजारौं कम आय भएका व्यक्तिहरूलाई ब्याजमुक्त सामाजिक loansण र वित्तीय शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्दछ। सँगै मिलेर हामी मेहनती परिवारहरूको आर्थिक क्षमता निर्माण गर्न सक्दछौं ताकि उनीहरूले उनीहरूको सपनाहरू प्राप्त गर्न सकून्।
तपाईंको नेटवर्कहरू प्राप्त गर्न सोशल मीडियामा हाम्रो पोष्टहरू साझा गर्न नबिर्सनुहोस् #VOTEMAF!
हामीसँग शीर्ष चारमा पुग्नको लागि १२ दिन छ।
अब यो काम गरौ!
नयाँ सामाजिक loanण साइटहरूको साथ स्तर बनाउँदै
lending8 मा अप्रील 11, 2014 द्वारा लिखित।
आज हामी एकदम नयाँ वेबसाइट अनावरण गर्न पाउँदा रोमाञ्चित छौं। तर हाम्रोलागि यो नयाँ दृश्य भन्दा धेरै अर्थपूर्ण हो।
हाम्रो नयाँ डिजिटल घरमा स्वागत छ! आज हामी एक नयाँ सामाजिक loanण वेबसाइट अनावरण गर्न रोमाञ्चित छौं। तर हाम्रोलागि यो नयाँ दृश्य भन्दा धेरै अर्थपूर्ण हो।
यो सुन्दर देखिन्छ, तर यो पेन्ट को नयाँ कोट भन्दा बढी हो
एफवा धेरै संगठनहरू, नयाँ वेबसाइटले नयाँ दृश्य शैली प्रतिनिधित्व गर्दछ। तर MAF को लागी, यो पेन्ट को ताजा कोट मात्र हो। यसले हाम्रो संगठनको लागि नयाँ, ठूलो दर्शन प्रतिनिधित्व गर्दछ। स्यान फ्रान्सिस्कोमा हाम्रो पहिलो लेन्डि C सर्कलबाट years बर्ष भन्दा बढी states राज्यहरूमा २ 25 नाफामुखी संस्थाको साथ साझेदारीमा, हामी कडा परिश्रम गरिरहेका परिवारहरूलाई करीव १TP २ टी million मिलियन डलर उधारो लिन र उधारो लिनमा सक्षम छौं। दूरदर्शी संग कोषहरु र साझेदारीको लागि एक नेटवर्क दृष्टिकोण, हामी एक साथ काम गर्दै छौं मेहनती मानिसहरूलाई वित्तीय छायाबाट बाहिर निकाल्ने। यही कारणले यो हाम्रो लोगोहरूमा पुनर्विचार गर्न, नयाँ ब्लग परिचय दिन र थप कथाहरू बताउने समय भएको थियो। हामीले युएक्स डिजाइन विशेषज्ञसँग काम गर्यौं डिजिटल टेलिपेथी यस नयाँ साइटलाई जीवनमा ल्याउन।
हाम्रो नयाँ अनलाइन घर सहभागीहरू, साझेदार संगठनहरू, र समर्थकहरूको लागि आवश्यक चीजहरूको लागि जाने ठाउँ हुनेछ। सम्भावित सहभागीहरूले स्थानीय प्रदायकहरू फेला पार्न सक्षम हुनेछन् र समर्थकहरू हाम्रो नयाँ ब्लगको सुरुवातको साथ अप-टु-डेट रहन सक्षम हुनेछन्, क्रेडिट मामिला.
एक नयाँ घर, नयाँ सुविधाहरू सहित
हाम्रो लोगोबाट मोबाइल-अनुकूल डिजाइनमा, हाम्रो साइटसँग नयाँ सुविधाहरू छन्:
ब्रान्डि। - हाम्रो नयाँ लोगो प्रतिनिधित्व गर्नुहोस् समावेशीकरण र विविधता एमएएफको मानमा समाहित
डिजाईन - हामीले एक सतत स्क्रोल डिजाईन अपनाएका छौं, हामीलाई ल्यापटप र मोबाइल फोनमा हाम्रो कथा अझ राम्रोसँग देखाउन र बताउन अनुमति दिदै
भिडियोहरू - हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् होमपेज तिनीहरूलाई केही नयाँ भिडियोहरू जाँच गर्न
क्रेडिट मामला ब्लग - नीति अन्तर्दृष्टिमा पर्दा पछाडिको अन्तर्वार्ताको ताजा सामग्री प्रकाशित गर्दै
थप सुधारहरू चाँडै आउँदैछ
अर्को केही हप्ताहरूमा, हामी तपाईंलाई अपडेट राख्नेछौं हामी नयाँ सुविधाहरू जस्तै जिप कोड खोजी (सामाजिक loanण प्रदायकहरूसँग सदस्यहरूलाई मद्दत गर्न), अनलाइन अनुप्रयोगहरू (जुन स्मार्टफोनमा पूरा गर्न सकिन्छ!) बाट पाहुना ब्लग पोष्टहरू सुरूवात गर्दछौं। क्षेत्र मा अग्रणी शोधकर्ताहरु, र अधिक कथाहरु।
हाम्रो नयाँ साइटले स्तर माथि मद्दत गर्दछ
यस साइटले हामीलाई कडा परिश्रम गर्ने परिवारहरूको लागि उचित वित्तीय बजार निर्माण गर्ने हाम्रो दृष्टिकोण प्राप्त गर्न अनुमति दिने कुराको अंश हो। संग धन असमानता बढ्दो, अमेरिका भर कडा परिश्रम गर्ने परिवारहरू बराबर शटको लागि संघर्ष गर्दैछन्। उधारो र भविष्यका लागि accessण र बैंकि services सेवाहरूमा पहुँचले ठूलो भूमिका खेल्छ। त्यसकारण यो हाम्रो कार्य हो कि गैर-नाफामुखी संस्थाहरूको लागि तिनीहरूका समुदायहरूमा Lending Circles प्रस्ताव गर्न यो सजिलो बनाउँदछ। अर्को केही हप्ताहरूमा, हामी एक ब्रान्ड नयाँ loanण सर्विंग प्लेटफर्म रोल आउट गर्दैछौं जसले endingण घेरा सर्कल प्रदायकहरूको लागि वित्तीय उत्पादनहरू कममा भएका समुदायहरूमा, कहिँ पनि ल्याउन सजिलो बनाउँदछ।
त्यसोभए तिमी के भन्छौ, तिमीलाई हाम्रो नयाँ घर मन पर्छ?
तपाईं हामीलाई मद्दत गर्न सबै भन्दा राम्रो housewarming उपहार दिन सक्नुहुन्छ! तपाईंको मनपर्ने सोशल मिडिया साइटमा तपाईंको प्रेम साझा गर्नुहोस्।
शिकागो मा भवन निर्माण गति
lending8 मा अप्रील 10, 2014 द्वारा लिखित।
वरिष्ठ खाता प्रबन्धक डानियल लाउ शिकागो मा Lending Circles ल्याउने मा आफ्नो अनुभव साझा
म हाम्रो सीईओ होसेबाट एक ईमेल खोल्छु: "डानियल, मार्च and१ र अप्रिल १ बचत गर्नुहोस् - हामी शिकागो जाँदैछौं १ टीटी T टी प्रस्तुतीकरणको लागि!"
ठीक छ! मलाई यात्रा गर्न मन पर्छ र केहि बर्षदेखि शिकागो गएन। चेसको उदार सहयोगको साथ, हामी अब शिकागोमा अधिक लेन्डिंग सर्कल पार्टनर प्रदायकहरूको खोजीमा छौं। यो हाम्रो लक्षित सेवा क्षेत्रहरू मध्ये एक हो र हाम्रा कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न र बचत, -ण-निर्माण, र वित्तीय सशक्तिकरण लाभ अधिक कम देखि मध्यम आय र संयुक्त राज्य भरिका आप्रवासी समुदायहरूमा वित्तीय सशक्तिकरण लाभ ल्याउन २०१ road को लागि रोड शोको श्रृंखला हो।
मलाई शिकागोमा भएको एक हप्ता भइसक्यो, तर म अझै उत्साहसंग चर्चा गर्दैछु। प्रस्तुति राम्रोसँग गयो - हामीसँग श्रोताहरूसँग पनि थिए जो एक अनौपचारिक लेन्डिंग सर्कल गरिरहेका छन् यसले कसरी कार्य गर्दछ भनेर वर्णन गर्न मद्दत गर्दछ! गैर-नाफामुखी समूहहरूबाट एक टन रूचि र सम्भावना रहेको छ। मैले धेरै मानिसहरूलाई स्वागत कक्षमा ल्याएको थिएँ जसले मलाई कोठाको अर्को छेउमा धेरै खानपान भएको पनी थाहा थिएन।
भोलिपल्ट हामी हाम्रा सब भन्दा नयाँ Lending Circles पार्टनर्स, शिकागोको चिनटाउनमा चिनियाँ अमेरिकी सेवा लिगसँग समय बिताउन सक्षम भए।
म तिनीहरूको वित्तीय शिक्षा कार्यशालामा बसें (मेरो मन्डारिन श्रवण कौशल परीक्षणमा राखियो), १ टीटी T टी कार्यान्वयनको बारेमा रणनीति बनाई, तिनीहरूका कार्यालयहरू र चिनटाउनको भ्रमण गरें, र रमाइलो डिम सम भोजनको लागि खाएँ!
त्यसपश्चात म पिलसेन छरछिमेकमा पुनरुत्थान परियोजनाको भ्रमण गर्न सरे। भवनभित्र छिर्दा एउटा सुन्दर भित्ताले मलाई अभिवादन ग g्यो। मैले समुदायमा उनीहरूले लगाएको धेरै ह्याटहरूको बारेमा थाहा पाएको छु एक नाफामुखी सम्पत्ती प्रबन्धक, वित्तीय शिक्षा प्रदायक, र घर मालिकाना एक्सपेंनेयरको रूपमा। Lending Circles तिनीहरूको अद्भुत कार्यको लागि उत्कृष्ट पूरक र बृद्धि हुनेछ।
शिकागो रोडशोले यति धेरै महान सम्बन्धहरू सुरू गर्न निम्त्यायो, म कसरी तिनीहरू बढ्दछु भनेर हेर्न पर्खिन सक्दिनौं र १ तिटी T टी र हाम्रो समुदायहरूको लागि वित्तीय क्षमताको गति कसरी निर्माण गर्नेछन्।
अर्को - मियामी!
क्रेडिट क्याच २२
lending8 मा अप्रील 4, 2014 द्वारा लिखित।
त्यहाँ सधैं एक क्याच छ। क्रेडिटको साथ, त्यहाँ क्याच २२ छ! मेहनती व्यक्तिलाई यो क्रेडिट क्याच २२ मा अडिनु सजिलो छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ एक महान उधार इतिहास बनाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईसँग क्रेडिट लाइनहरु हुनुपर्दछ। तर क्रेडिट लाइनहरूका लागि अनुमोदित हुनको लागि, तपाईंले repण चुकौतीको इतिहास देखाउनुपर्नेछ। यसैले क्रेडिट २२ पकड!
लामो क्रेडिट, आवासीय वा बैंकिंग ईतिहास बिना, तपाईं यो क्रेडिट क्याच २२ मा फस्ने सम्भावना बढी छ।
यो एक वास्तविक समस्या हो जुन हाम्रो ग्राहकहरू अपार्टमेन्ट वा क्रेडिट कार्ड लिन चाहन्छन् तर तिनीहरूसँग फाईल छैन वा धेरै पातलो छ। जब एक nderणदाता एक व्यक्ति loanणको लागि योग्य छ कि भनेर पत्ता लगाउन छानबिन गर्छ, जसले वास्तवमा स्वीकृत हुने अवसरलाई कम गर्छ। लामो क्रेडिट, आवासीय वा बैंकिंग इतिहास बाहेक, तपाईं यो क्रेडिट क्याच २२ मा अडिनुहुन्छ।
हामी सबैलाई अचाक्ली, पनी वा अदृश्य महसुस गराउन मद्दत गर्न चाहन्छौं। यही कारणले किन एमएएफले उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ जसले ग्राहकहरूलाई हाम्रो सामाजिक loansण र वित्तीय शिक्षाको साथ एक सुरक्षित जिम्मेवार लाइन दिन्छ र अन्ततः सुरक्षित र सशक्त जीवन बिताउन सक्छ। तल इन्फोग्राफिकले कसरी क्रेडिट 22 ले काम गर्दछ र घटनाको केही प्रमाणहरू हाम्रो आफ्नै सदस्यहरूको अनुभवबाट दिन्छ।
के नयाँ लोगो जस्तै नयाँ पोशाक पाउनु जस्तै हो?
lending8 मा मार्च 27, 2014 द्वारा लिखित।
जब नयाँ गैर-नाफामुखी संस्थापित हुन्छ, यो सामान्यतया कसैको चचेरा भाई वा साथी हो जसले नयाँ लोगो डिजाइन गर्ने काम गर्दछ। उनीहरूले सक्दो राम्रो काम गर्छन् र संगठन उत्सुकताका साथ यसलाई खान्छ, आभारी छ कि एउटा कुरा गरीयो। यदि उनीहरूले यो महसुस गर्दैनन् भने, स्टाफले छिटो नै लोगोको वरिपरि सिर्जना गरिएको ब्रान्ड पहिचान अपनाउँछ। उडानकर्ताहरू र वेबसाइटहरू र प्रस्तुतीकरणहरू सबै समान फन्टहरू र र schemes्ग योजनाहरूको साथ, तिनीहरू सबै चीज यस्तो देखिन्छन् कि यससँग सम्बन्धित भाव छ। तर केहि समय पछि, संगठन सामान्यतया यसको आफ्नैमा आउँदछ र त्यो पुरानो दृश्य मात्र राख्न सक्दैन। को संगठन हो अब रंग, फन्ट र दृश्य शैली संग मेल खान्दैन कि यो आफूलाई संसारमा प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक छ।
एमएएफ, सैन फ्रान्सिस्को मा गैर मुनाफा जहाँ म काम गर्छु, कुनै अपवाद छैन। करीव सात बर्ष पहिले, हामी समुदाय अधिवक्ताहरूको एक अद्भुत समूह द्वारा शुरू गरिएको थियो। जब लेवी स्ट्रॉस कम्पनी, एक लामो-समय छिमेकी नियोक्ता, यसको अन्तिम बन्द भयो कारखाना सान फ्रान्सिस्कोमा, समुदायका नेताहरू र कम्पनीले नयाँ किसिमको भविष्यको कल्पना गर्न सँगै मिले। आयको साथ बिक्रीबाट, तिनीहरू एक नयाँ गैर-नाफामुखी संस्था बनाउन मिशन जिल्ला को कम आय आयवासीहरु लाई मद्दत गर्न हुनेछ। र यसैले Mission Asset Fund गठन गरियो। र ती समुदाय नेताहरू मध्ये एकको जीवनसाथीले हाम्रो पहिलो लोगो सिर्जना गर्‍यो। जब म पहिलो लोगोमा हेर्छु, म कल्पना गर्दछु कि हाम्रा सदस्यहरूले उनीहरूको बैंक खाताहरूको बृद्धि गर्दै जाँदैछन्, विभिन्न माइलस्टोनहरू भेट गर्दै।
हाम्रो २०० logo लोगो
तर त्यो सात बर्ष अघि थियो, जब नाफारहित संस्थामा दुईजना कर्मचारीहरू थिए, केही दर्जन ग्राहकहरू र नयाँ प्रोग्रामहरू। अब यो सात बर्ष र धेरै छ पुरस्कार पछि र हाम्रो सामाजिक loansण अझै पनि मिसन जिल्ला मा पाउन सकिन्छ, तर छ अन्य अमेरिकी राज्यमा। कठोर भवन ब्लकको साथ पुरानो दृश्य मानिस, समुदाय र गैर नाफामुखी एक साथ ठूलो निष्पक्ष वित्तीय बजार निर्माण गर्न काम गर्नेहरूको ठूलो टेपेस्ट्रीमा फराकिलो छ।
तपाईको संगठनले लगाउने रंगहरू अर्थपूर्ण छन्।
गुलाबी, १ th औं शताब्दीमा एउटा र color्ग जवान केटाहरूको लुगाको लागि आरक्षित थियो, अब "केटीहरूको लागि मात्र" मेरो पाँच वर्षको छोराका अनुसार छ। गुलाबी पनि अब स्तन क्यान्सर वकालत को एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क संग सम्बन्धित छ। एमएएफको लागि, हाम्रो पहिलो लोगोको गाढा ब्लूजले ज्ञान, शक्ति, अखण्डता र गम्भीरतालाई जनाउँछ। तर जसले हामीलाई चिन्छ, हामी पनि फुर्तिलो, समुदाय आधारित र कुराकानी बदल्न डराउँदैनौं।
यदि कुनै ब्रान्डले सबै गर्छ कसैले तपाईंको संगठनको बारेमा भन्छ वा जान्छ भने, लोगो टीम टोली जस्तो हुन्छ।
वर्षौं बर्ष, तपाईंको शरीर बढ्दै जान्छ र तपाईंको दिमाग परिपक्व हुँदा पनि, तपाईं अझै २०० 2007 मा सँगै टाँसिएको युनिफर्म लगाएर अडिन सक्नुहुन्छ जब सोप्रानोस कालोमा फ्याकियो। यस पटक, हामीलाई थाहा छ हामी कहाँ जाँदैछौं र हामीलाई थाहा छ त्यहाँ कसरी पुग्ने। त्यसैले हामीले यसमा अचम्मका रचनात्मक टीमसँग काम गर्यौं डिजिटल टेलिपेथी वर्दीको साथ आउन जुन हामी अहिले कसलाई मिल्छ।
हाम्रो नयाँ लोगो
हामीले कठोर आकारहरू र गाढा ब्लूजको व्यापार गर्‍यौं विभिन्न प्रकारका जीवन्त पान्टोन रंगहरूको लागि, ऊर्जावान एक्वा ब्लूज, चमकदार घाँस साग, धनी बैजनी।
हामीलाई लाग्छ हाम्रो नयाँ रूपले संसारलाई देखाउनको लागि राम्रो कार्य गर्दछ कि हाम्रो परिवर्तनको बारेको दृष्टिकोण के हो।
यसले तपाईंलाई के भन्छ?
सामाजिक ndingणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै
lending8 मा मार्च 26, 2014 द्वारा लिखित।
जन Stürmann, सैन फ्रांसिस्को बाहिर आधारित एक भिडियो फोटोग्राफर, एमएएफ कार्यक्रमहरू र कसरी सामाजिक reallyण ले मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्दछ हाइलाइट चार अद्भुत नयाँ भिडियो उत्पादन। हाम्रो कथा क्याप्चर गर्ने सम्बन्धमा मसँग आफ्ना विचारहरू साझा गर्न उहाँ अनुग्रही हुनुहुन्थ्यो र उनले अनुभवबाट के सिके।
तपाइँको प्रक्रिया कस्तो छ जब तपाइँ नयाँ भिडियो / कथा कथन परियोजना शुरू गर्नुहुन्छ?
पहिलो भागले ग्राहकले बताउन खोज्नु भएको कहानीको केही ज्ञान प्राप्त गर्न कोशिस गर्दैछ (जुन वास्तविक कथा प्राय: सम्पादन प्रक्रियामा मात्र देखा पर्दछ।) त्यसो भए यसले यस कथा भन्न सक्ने मुख्य व्यक्तिहरूको पहिचान गर्दछ। एक अन्तर्वार्ता अघि म मेरो जिज्ञासा सोध्न प्रश्नहरूको एक सूची उत्पन्न गर्न मा मेरो गाईड हुन दिनुहोस्। मलाई लाग्छ कि स्क्रिप्ट लेख्नु सामान्यतया धेरै उपयोगी हुँदैन। यो कुराकानीमा संलग्न भई, क्यामेरालाई बेवास्ता गर्ने कोसिस गर्दा, जुन आश्चर्यजनक विवरणहरू उदय हुन्छन्। एक पटक मसँग अन्तर्वार्ता लिएपछि, म यसलाई ट्रान्सक्रिप्ट गर्दैछु र त्यहाँबाट पहिलो ड्राफ्ट स्क्रिप्ट बनाउँदछु। त्यसोभए, आदर्श रूपमा, म पछाडि जान्छु र बी रोल फुटेज शूट गर्छु, जुन अन्तर्वार्तामा मैले राखेको हो।
समुदाय र सम्बन्धहरू Mission Asset Fund का लागि दुई महत्त्वपूर्ण मानहरू छन्। कसरी तपाईंले ती अवधारणाहरू भिडियोमा कब्जा गर्न प्रयास गर्नुभयो?
म सामान्यतया एक्लै हुँदा सक्दो असभ्य रूपमा काम गर्ने कोसिस गर्छु, त्यसैले के कुराकानी कहिले हुने स्वाभाविक रूपमा सम्भव भएसम्म हुन्छ। मेरो दिशा कहिल्यै आश्चर्यजनक जस्तो हुँदै गइरहेको जस्तो आश्चर्यजनक हुँदै आएको छैन। मेरो काम ती क्षणहरूमा चौकस हुनु हो।
के त्यहाँ एक विशेष भिडियो छ जुन तपाईंले सब भन्दा रमाईलो वा चाखलाग्दो अनुभव सँगै राख्नुभयो?
म सधैं अपरिचित भएको संसारमा आमन्त्रित हुनका लागि विशेषाधिकारको रूपमा लिन्छु र व्यक्तिहरूका कथाहरूसँग भरोसा गर्न सकिन्छ। सतहमा पैसा र likeण जस्ता विषय बोरिंग जस्तो देखिन्छ। तर पैसाको बारेमा इमान्दारीपूर्वक कुरा गर्नु हाम्रो संस्कृतिको अन्तिम कुरो हो। व्यक्तिगत रूपमा मँ पैसा मा कसरी कुराकानी को बारे मा धेरै चासो छु। त्यसोभए त्यस ब्यापलाई व्यावसायिक रुपमा समाहित गर्न सक्षम हुनु मेरो लागि अत्यन्तै सन्तोषजनक थियो।
के तपाईंलाई एक आकर्षक तरिकामा क्रेडिट र loansण जस्ता वित्तीय अवधारणाहरू कल्पना गर्न गाह्रो लाग्यो?
के मैले यस प्रोजेक्टमा जानको लागि चाहेको होइन, धेरै ग्राफ र चार्टहरूले भरिएको बोरिंग भिडियो सिर्जना गर्नु थियो। चाल ग्राफ र चार्ट पछाडि कथाहरू कसरी फेला पार्ने भनेर आंकडा थियो। हामी सबै पैसाको साथ दैनिक जागरूकता को डिग्री को साथ पकड।
तपाईं समुदायहरू र प्रोजेक्टहरू अन्वेषण गर्न भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ जुन MAF निम्न लि at्कमा संलग्न छ: अवसरको शक्ति, सबैजना सफलतामा एक शटको योग्य छन्, एक निष्पक्ष वित्तीय बजार बनाउने, aएनडी बिल्डिंग क्रेडिट, भवन समुदायहरू.
एक सपना अब स्थगित
एडगरले केही हप्ता पहिले केहि गरेको थियो जुन उसले विगत दुई बर्षदेखि सपना देखेको थियो। सान फ्रान्सिस्कोको मिसन जिल्लामा घमाइलो दिनमा, एडगर सामाजिक सुरक्षा प्रशासन कार्यालयमा प्रवेश गरे र एउटा आवेदन भर्न शुरू गरे। तपाईंले एडगर र उसको पार्टनर गुस्ताभोलाई सम्झन सक्नुहुन्छ जुन उनीहरू पहिलो पटक प्रोफाइल भएको थियो खाडी क्षेत्र रिपोर्टर। Mission Asset Fund र बे क्षेत्र रिपोर्टर नजिकबाट भएको छ एडगर र गुस्ताभोको दुई बर्षे यात्रा पछि.
एडगर र गुस्ताभोले आफ्नो अधिकांश जीवनका लागि अमेरिकी सपनाको पीछा गरिरहेका थिए। एक सपना, कि हालै सम्म, तिनीहरूले सोचे कहिल्यै सत्य हुन सक्छ। बच्चाको रूपमा, तिनीहरू आफ्ना आमाबाबुको साथ संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसाइँ सरेका अवसरहरू र उत्तम जीवनको खोजीमा। जब तिनीहरू आइपुगे तिनीहरू सामेल भए ११ करोड अन्य undocumented आप्रवासीहरू संयुक्त राज्य अमेरिका मा बस द्वारा प्राप्त गर्न को लागी बस्ने।
एडगर र गुस्ताभो १ टीटी T टी अफिसमा (फोटो: रिक गेरह्टर)
अमेरिकी सपनाको पीछा गर्दै
दुई वर्ष अगाडि एडगरले सोचेका थिएनन कि एक दिन उनी आफ्नो अमेरिकी सपना साकार गर्न ट्र्याकमा छन्। गुस्ताभो र एडगरको जीवन गम्भीर रूपमा सीमित गरीएको थियो उनीहरूको Undocumented स्थिति द्वारा। एडगरको बाल्यकालको शिक्षकको सपना उच्च माध्यमिक विद्यालय पछि अनिश्चितकालीन रोकिएको थियो। उनलाई यूसी बर्क्लेमा स्वीकार गरिएको थियो, तर भर्ना गर्न असमर्थ थियो किनभने Undocumented विद्यार्थीहरूले परम्परागत loansण वा संघीय वित्तीय विद्यार्थी सहायता पहुँच गर्न सक्दैनन्।
एक पटक कार्यरत संसारमा सामेल भएपछि, एडगर एक अनुकरणीय कर्मचारी थिए, जसले आफ्ना सहकर्मीहरूको सम्मान कमाउँदै थिए र उनको पर्यवेक्षकहरूले उनको कडा कार्यको नैतिकताको लागि मान्यता पाए। उनलाई पदोन्नति प्रस्ताव आउँदा यो सबै टुक्रियो। एडगर कम्पनीले अनुरोध गरेको कागजात उत्पादन गर्न असमर्थ थियो र उसलाई छोड्न बाध्य पारियो
गुस्ताभो कलेजमा जान असमर्थ थिए र केवल हाई स्कूलले जनताको घर सफा गरेको, लामो घण्टा काम गर्ने र थोरै तलब पाउँदा काम सुरक्षित गर्न सक्थ्यो।
एक अन्य चुनौती एडगर एक undocumented आप्रवासी को रूप मा सामना उनको दुई जवान बच्चाहरु देखि अलग भइरहेको थियो। दस्तावेज बिना, गुस्ताभो वा एडगार न त उनीहरूलाई सान फ्रान्सिस्कोमा घर ल्याउन विमानमा चढ्न सक्छन्। गुस्ताभोले आफ्ना बच्चाहरूसँग समय समयमा फोनमा कुरा गर्न सक्दछ। गुस्ताभो र एडगर उनीहरूको परिवारको लागि सम्पूर्ण दिन बच्चाहरूको साथ पुनर्मिलन हुने दिनको लागि कुर्नुहोस्।
एक नयाँ अवसर
२०१२ को शुरुमा, एडगर र गुस्ताभोको जीवन सदाको लागि बदलिनेछ जब ओबामा प्रशासनले एक नया कार्यक्रम घोषणा गरे जुन अमेरिकामा बसोबास गर्ने केही अज्ञात युवाहरूका लागि काम गर्ने देशद्रोह र अनुमति प्रदान गर्ने थियो जुन उनीहरू १ 16 बर्षको उमेर पुगेका थिए जुन अझैसम्म फर्केका छैनन्। १
को बचपन आगमनको लागि आस्थगित कार्य (DACA), अवसर थियो जुन उनीहरूले पर्खिरहेका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्ने अन्य धेरै प्रमाणित व्यक्तिहरू जस्तै एड्गर र गुस्ताभो पनि विनाबाधित जीवन बिताइरहेका थिए र निरन्तर आर्थिक कठिनाइमा थिए। तिनीहरू पेचेकदेखि पेचेकसम्म बाँचे, र चार सय siy डलर आवेदन शुल्क पहुँच भन्दा बाहिरको जस्तो देखिन्थ्यो। एडगर र गुस्ताभो लागतहरू कभर गर्ने उपाय खोज्न कटिबद्ध थिए।
सर्कलमा सम्मिलित हुँदै
साथीहरू र द्वारा SF LGBT केन्द्र, एडगर र गुस्ताभोले Mission Asset Fund को बारेमा सिक्यो Dreamers को लागी उधारो सर्कल कार्यक्रम। Dreamers कार्यक्रम को लागी Lending Circles ले शून्य ब्याज loansण प्रदान गर्दछ जसले एडगर र Gustavo लाई अनुमति दियो, र उनीहरु जस्ता अरु धेरैले fees सय xt dollars डलर को लागी आवेदन शुल्क तिर्न आवश्यक छ। दस महिनाको कार्यक्रमको अवधिमा, सहभागीहरूले अनलाइन वित्तीय प्रशिक्षण कक्षा लिन्छन् र तिनीहरूले buildण चुक्ता गर्दा क्रेडिट निर्माण गर्दछन्। जब सहभागीहरू DACA का लागि आवेदन दिन तयार हुन्छन्, Mission Asset Fund ले तिनीहरूलाई अमेरिकाको होमल्याण्ड सुरक्षा विभागमा चेक आउट गर्दछ।
एडगर र गुस्ताभोको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यालयको लागि दुई वर्षको यात्रा कागजको हिमाल र रातो टेपको माईलले भरिएको थियो। अब समाधान गरिएको कागजी कार्यले गुस्ताभोको आवेदनलाई हप्तौं रोक्न बाध्य तुल्यायो, जबकि फाइल गर्ने त्रुटिले एडगरलाई उनको आवेदन फेरि सुरु गर्न बाध्य तुल्यायो। यो सबै मार्फत, गुस्ताभो र एडगर सधैं समर्थनको लागि एक अर्कासँग थिए। अब तिनीहरूसँग कागजात, समुदाय, र क्रेडिट इतिहास छ।
वित्तीय मुख्यधारमा पहुँच गर्न तिनीहरूको नयाँ क्षमताको साथ, तिनीहरू आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न एक कदम नजिक छन्। Dreamers कार्यक्रम र DACA को लागि लेन्डिंग सर्कल एडगर र Gustavo को लागी सम्भावनाहरु खोलेको छ। एडगर अब स्कूलमा पछाडि जान, आफ्नो परिवारलाई एकताबद्ध गर्न, र स्थिर काम पाउन सक्षम हुनेछ। जसरी मसीले आफ्नो सामाजिक सुरक्षा अनुप्रयोगमा ड्राई गर्दछ, एडगरको सपना अन्ततः वास्तविकतामा परिणत हुँदैछ।
Lending Circles का लागि मार्ग खाली गर्दै
गएको महिनामा म सामेल भएँ सेनेटर लू Correa (डी-सान्ता आना) Sacramento मा कानून को एक महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत गर्न कि गैर नाफा नक्कल गर्नेहरूको कामलाई माथि उठाउनेछ जसले अन्डरवेर्डेड समुदायहरूको लागि वित्तीय मूलधारको लागि मार्गहरू सिर्जना गर्दछ। सिनेट बिल66 क्यालिफोर्नियामा 1०१ सी non नाफामुखी संस्थालाई मान्यता दिन्छ जुन किफायती, क्रेडिट निर्माण व्यक्ति loansण प्रस्ताव गर्दछ।
मसँग एलिसिया भिलेनेवा, लेन्डि C सर्कल सदस्य र उद्यमीसँगै ल्याए, जो उनको सफलताको कथा साझा गर्न उत्सुक थिए। एलिसिया भन्न मन पराउँछिन् कि उनका तामले मायाले भरिएका छन्, र सबै भन्दा राम्रो मान्छेहरू उनको तामाले भरिएका छन्। जब एलिसियाले पहिले ब्यापार सुरु गरे, उनी र उनको जवान छोरा पेड्रो घरको ढोका, वर्षा वा चम्किरहेका थिए, उनीहरूको तामेल बेच्न। राम्रो हप्तामा उनीहरूले दुई सय डलर नाफा कमाएको हुन सक्छ, उनीहरूको भाँडा तिर्न मुश्किल नै छ। एलिसिया उनको व्यवसायमा विश्वास गर्थिन् तर किनभने उनीले debtण आर्जित गरेका थिए, परम्परागत ndणदाताहरूले उनीमा लगानी गर्ने अवसर लिने छैनन्।
Sn लू कोरिया, एलिसिया विलेनुएवा, जोस क्विनोनेज, मारिसाबेल टोरेस, जोर्गे ब्लान्डन
पहुँच सिर्जना गर्दै
एलिसिया एक्लै थिइनन्, मिशनमा Lat० प्रतिशत ल्याटिनो आप्रवासीहरूको जाँच खाता थिएन, र mission forty प्रतिशत मिशन परिवारहरूमा कुनै क्रेडिट इतिहास थिएन। कुनै पनि मूलधार बैंक कुनै क्रेडिट स्कोर बिना कसैलाई loanण दिन इच्छुक छैन। जब एक परिवार paycheck-to-paycheck बाँचिरहेको छ उनीहरूसँग राम्रो क्रेडिट, पैसा बचत गर्ने, वा मुख्यधारको बैंकिंग प्रणालीमा पहुँच गर्ने अवसर छैन।
एलिसिया जस्ता व्यक्ति, शिकारी fromणदाताहरूबाट उच्च ब्याज भुक्तान दिन loansण वा नगद अग्रिम प्राप्त गर्न बाध्य छन्। क्यालिफोर्नियाको वित्त endणदाता कानून (CFLL) भित्र एक इजाजतपत्र छुट स्थापना गरेर, SB 896 मान्यता दिनेछ र उत्थान गर्ने नाफामुखी संस्था जसले अत्यधिक प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सिर्जना गरेको छ किफायती साना-डलर loansण र वित्तीय सेवामा अन्य मार्गहरू सिर्जना गर्ने अन्य सेवाहरूको अधिक पहुँच प्रदान गरेर। मुलधार।
हाम्रो लेन्डि C सर्कलका एक सहभागीको रूपमा एलिसियाको अनुभव उनको व्यवसायको लागि महत्वपूर्ण मोड थियो। उनले एक हजार डलर, शून्य ब्याज, सामाजिक-cookingण कुक उपकरणहरू किन्नको लागि र खाद्य कार्टमा तल भुक्तान राख्ने पहुँच प्राप्त गरे। के एक प्रेम को श्रम को रूप मा शुरू एक फलफूल व्यापार मा विकसित भएको छ, आठ कर्मचारीहरु जो एक हप्तामा तीन हजार tamales उत्पादन। एलिसिया प्राय: घटनाहरू पूरा गर्दछ, र उनको तामले चाँडै स्थानीय पूर्ण फूडहरूको तातो बारमा चित्रित हुनेछन्।
समर्थन भेला गर्दै
एसबी 896support लाई समर्थन गर्न १teen वटा संगठनले हामीसँग सामेल भएको घोषणा गर्न पाउँदा हामी खुसीले खुसी छौं। हामीलाई समूह सहितको पत्र प्राप्त भएको छ। अवसर कोष, NCLR र सम्पत्ति निर्माण अवसरहरूको लागि केन्द्र। सैन फ्रांसिस्को सुपरवाइजर डेभिड क्याम्पोस समर्थन पत्र पनि लेखेको छ।
Lending Circles जस्ता प्रोग्रामहरू बिना, एलिसियाको आफ्नै व्यवसाय चलाउने सपना असम्भव हुने थियो। एलिसिया हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापन प्रशिक्षण मार्फत सुरक्षित पूँजी पहुँच गर्न र उनको उधारो र विश्वास निर्माण गर्न सक्षम भयो। उनले अर्को गैर नाफामुखी संगठनबाट पनि समर्थन प्राप्त गरे, ला कोकिना। एसबी66 ले अधिक व्यक्तिहरूलाई अवसरहरूमा अवसर प्रदान गर्दछ उनीहरूलाई सफलताको उचित शटको लागि आवश्यक छ।
एलिसिया व्यवसाय योजनामा कडा परिश्रम गरिरहेकी छिन जसले उनको हलचल फूड कार्टलाई ईट्टा र मोर्टार रेस्टुरेन्टमा रूपान्तरण गर्दछ। समर्थनको साथ उनले Mission Asset Fund बाट प्राप्त गरेकी उनी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नतिर लागिरहेका छन्। को सफल पारित संग SB 896 हामी अधिक कम आय भएका क्यालिफोर्नियालीहरू, एलिसिया जस्ता loansणमा पहुँच गर्ने र उनीहरूको वित्तीय स्थिरता निर्माण गर्ने सपनाहरू साकार गर्ने देख्दछौं।
यो le वर्षको सामाजिक ndingण जस्तो देखिन्छ
lending8 मा मार्च 15, 2014 द्वारा लिखित।
पाँच बर्ष पहिले, हामीले कहिले पनि यो प्रकाशन प्रकाशित गर्ने कल्पना गर्न सकेनौं। जब एमएएफले पहिलो पटक यो सामाजिक programण दिने कार्यक्रम सुरू गर्यो, Lending Circles, हामी कहाँ थाँहा थाल्दैनौं। हामी भर्खर नयाँ विचार कोशिस गर्दै थियौं। तर त्यसपछि त्यो विचार आफ्नै खुट्टा बढ्यो। यो बढ्दै र विस्तार हुँदैछ - स्यान फ्रान्सिस्कोको एउटा छिमेकबाट पाँच अमेरिकी राज्यहरूमा।
हामी यस अनलाइन म्यागजिनलाई five बर्षको यात्रामा रिलीज गर्न उत्साहित छौं।
तपाईं पहिलो पटक हाम्रो संस्थापकको कथा पढ्न सक्नुहुन्छ। जोस क्विनोनेजहाम्रो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यस पुस्तिकामा एक जवान केटाको अवसर र वृद्धिको यात्राको बारेमा एउटा अचम्मको कथा छ जुन एउटा फ्लाई मार्केटमा कामको साथ सुरू हुन्छ।
तपाईले जीवनका प्रेरणादायक कथाहरू पनि पाउनुहुनेछ जुन सामाजिक ndingण द्वारा परिवर्तन गरिएको थियो। हाम्रो एक सदस्यको बारेमा पढ्नुहोस्, क्रिस्टिना रुइज, जसले सान फ्रान्सिस्कोमा कल गरिएको अद्भुत फेसन ट्रक चलाउँछिन् शीर्ष शेल्फ बुटिक (र उनलाई अवश्य भेट्नुहोस् जब तपाईं सान फ्रान्सिस्कोको क्रोकर ग्यालरिया नजिक हुनुहुन्छ)। ईसा हपकिन्सले उनको बारेमा ग्रिस्ट पत्रिका लेखमा लेखिन् “पियर टु पियर लेन्डिंगले وال स्ट्रिट मिडलमेनलाई काट्छ“। क्रिस्टिनाका लागि, बार्टेन्डरको रूपमा उनको पहिलो क्यारियरको अर्थ उनको आर्थिक "नगद-मात्र" थियो।
तर के हुन्छ जब एक नगद-मात्र बार्टेन्डरले फेसन ट्रक सुरू गर्न चाहन्छ र बैंकबाट व्यापार loanण चाहिन्छ?
तपाईं एक्विलिना सोरियानो-वर्सोजा, को गतिशील कार्यकारी निर्देशकको बारेमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ पिलिनो मजदुर केन्द्र लस एन्जलस मा। हरेक दिन उनी कम आयमा बस्ने घरेलु कामदारहरूलाई उनीहरूको पेचेक्सबाट पैसा बचत गर्ने उपायहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछन् यदि तिनीहरू अनपेक्षित रूपमा काम समाप्त भएमा तिनीहरू ठीक हुन्छन्। कर्मचारी PWC एक तंग-बुनिएको समुदाय हो जसले गम्भीर सामानहरू गर्दछ। तिनीहरू हाम्रो एकमात्र साझेदार हो जसले हाम्रो सबै सामाजिक loanण कार्यक्रमहरू चलाउँछन्: १टीपी4टी, सपना देख्नेहरुका लागि १टीपी T टी, नागरिकता र सुरक्षा निक्षेप ansणका लागि १टीपी T टी। तिनीहरूका सदस्यहरूले मायापूर्वक "Lending Circles" लाई यसको फिलिपिनो नाम, "Paluwagan" बाट कल गर्दछन्।
तर सबैलाई थाहा छ, ठूला कथाहरू सबै कुरा होइनन्। परिणाम कुरा पनि।
यसैले तपाईं महान इन्फोग्राफिक्सहरू पनि फेला पार्नुहुनेछ जसले देखाउँदै छ कि कति जना व्यक्ति उच्च लागत debtण घटाएर बचत गर्दैछन्। तपाईंले औसत क्रेडिट स्कोर वृद्धि देख्नुहुनेछ र हामी कस्तो वृद्धिको गतिमा हिंड्यौं भनेर देख्नुहुनेछ।
हामी अब कहाँ जान्छौ जस्तो लाग्छ?